Wasiirka Gaashaandhiga oo ka hadlay Hubka aanan loo ogoleyn Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirka Gaashaandhiga oo ka hadlay Hubka aanan loo ogoleyn Soomaaliya
Muqdisho (KON) Wasaarada Gaashaandhiga dalka Soomaaliya ayaa faah-faahin ka bixisay hubka aan loo ogoleyn in dalka Soomaaliya laga isticmaalo xilli dhawaan Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ay xayiraada hubka Soomaaliya ay ka qaaday.
Wasiirka Gaashaandhiga dalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in hubka Soomaaliya aan loo ogoleyn inay isticmaasho ay kamid yihiin Hubka lidka diyaaradaha, Miinooyinka, iyo hubka taangiyada lagu baab’iyo.
C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa sheegay in dalka Soomaaliya Golaha ammaanka uu isku raacay inaysan isticmaali karin hubkaasi balse ay isticmaali karaan hubabka kale ee lagu dagaalamo.
Wasiirka Gaashaandhiga dalka Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa sidoo kale ka hadlay maamulada dalka Soomaaliya qaarkood ee kasoo horjeestay in xayiraada dhanka hubka ah Soomaaliya laga qaado.
Fiqi ayaa tilmaamay in maamulada dalka uu usheegayo in hubka gacanta Dowladda Soomaaliya uusan ka bixi doonin aysana jirin cid lagu dhibaataynayo.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhawaan xayiraada dhanka hubka ee saaran Soomaaliya ka qaaday muddo halsano oo tijaabo ah iyadoo hubka qaarna laga mamnuucay inay isticmaasho Dowladda Soomaaliya.